Barcelona Oo U Aqoonsatay Hakim Ziyech, Iyo Timo Werner Inay Yihiin Bedelka Raheem Sterling
HomeWararka CiyaarahaBarcelona oo u aqoonsatay Hakim Ziyech, iyo Timo Werner inay yihiin bedelka Raheem Sterling
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay isha ku heyso labada ciyaaryahan ee Chelsea Hakim Ziyech iyo Timo Werner si ay ugu bedelaan Raheem Sterling .
Labada weeraryahanba waxay ku dhibtoonayaan inay si joogto ah ku bilowdaan shaxda Thomas Tuchel , iyadoo Ziyech uu ku soo bilowday kaliya labo kulan oo Premier League ah 2021-22 ilaa hadda.
Werner ayaa ka soo laabtay dhaawac isagoo bedel ku soo galay Talaadadii 4-0 ay ku xasuuqday Juventus, laakiin imaatinka Romelu Lukaku ayaa sidoo kale fursadihiisa xaddiday.
Iyadoo Xavi uu doonayo inuu ku xoojiyo safkiisa weerarka ee Barcelona, ESPN ayaa sheeganeysa in Ziyech iyo Werner ay yihiin bartilmaameedyada suurtagalka ah ee La Blaugrana oo ku wajahan suuqa Janaayo.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in Barcelona ay mar hore wax ka weydiisay helida labada ciyaaryahan, waxaana ay dooneysaa in heshiis kasta oo jiilaalka uu noqdo amaah, iyadoo ikhtiyaarka ay ku iibsan karaan ay ku jiraan dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Qandaraaska Ziyech ee Stamford Bridge ma dhacayo ilaa 2025, halka Werner uu sidoo kale wax ka yar afar sano ka harsan yahay inuu ku sii socdo qandaraaskiisa kooxda heysata Champions League.